ukuvalwa kwemvamisa ephezulu | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa izixazululo zokushisa zokungeniswa
ukuvuthwa okuphezulu kwemvamisa
Ukungeniswa Kwesikhashana I-Annealing Copper Tubes Objective Ukushisa ngokufanayo amashubhu amabili wethusi ngasikhathi sinye kuya ku-800 ° F (426 ° C) ngemizuzwana engaphansi kwe-10 ngokushisa kwe-induction. Izinsiza kusebenza I-DW-HF-45kw heater induction Heil coil Material • Amashubhu amabili wethusi - OD: 0.69 '' (1.75 cm) - ID: 0.55 '' (1.40 cm) - Ubude: 5.50 '' (14.0 cm). Amapharamitha ayisihluthulelo Amandla: 35kW Ithempelesha: 842 ° F (450 ° C)… Funda kabanzi
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi Kuhlanganisa amashubhu ethusi, ukuvuthwa okuphezulu kwemvamisa, ukufakwa kwe-induction, lokungeniswa annealing yethusi, lokungenisa annealing ishubhu yethusi, Isingeniso Annealing Copper Tubes, RF annaaling amashubhu wethusi
Le nqubo ishisa izinsimbi esezivele zicubungulwe kakhulu. Ukufakwa kwe-induction kunciphisa ubunzima, kuthuthukisa i-ductility futhi kudambise izingcindezi zangaphakathi. Ukuncishwa komzimba okugcwele kuyinqubo lapho kutholakala khona umsebenzi ophelele. Ngokuhlanganiswa komthungo (okwaziwa ngokunembile njenge-seam normalizing), kuphela indawo ethintekayo ekushiseni ekhiqizwa inqubo yokushisela.
Ukufakwa kwe-induction nokwenza okujwayelekile kuletha ukushisa okusheshayo, okuthembekile nokwenziwe kwasendaweni, isilawuli esiqondile sokushisa, nokuhlanganiswa okulula okuku-inthanethi. I-induction iphatha umsebenzi womuntu ngamunye ekucacisweni ngqo, ngezinhlelo zokulawula ngokuqhubekayo nokuqapha yonke inqubo.
Ukufakwa kwe-induction nokwenza okujwayelekile kusetshenziswa kakhulu embonini yamapayipi namapayipi. Iphinde inamathisele izintambo, imichilo yensimbi, izindwani zommese kanye neshubhu lethusi. Eqinisweni, ukungeniswa kulungile kunoma yimuphi umsebenzi wokuncoma.
Uhlelo ngalunye lwe-DAWEI Induction annealing lakhiwe ukwanelisa izidingo ezithile. Enhliziyweni yohlelo ngalunye
i-DAWEI Induction Heating generator efaka ukulayishwa okuzenzakalelayo komthamo namandla engaguquguquki amandla kuwo wonke amazinga kagesi. Iningi lezinhlelo zethu ezilethwe nazo zinezixazululo zokuphatha ezilawulwa ngokwezifiso.
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa Amathegi ukunamathela, ukuvuthwa okuphezulu kwemvamisa, ukuphakama kwezinga eliphezulu, ukufakwa kwe-induction, ibhuloho lokufakelwa kwe-induction, Kuyini ukuchithwa kwe-induction?